Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati pemvura-based ink neoiri-yakavakirwa inki yemuchina wemifananidzo?
Oiri-yakavakirwa inki ndeyekudzora iyo pigment mumafuta, senge yemafuta emafuta, mafuta emiriwo, nezvimwe. Iyo inki inonamatira kune iyo yepakati neoiri kupinda uye kubuda kwemhepo pane yekudhinda svikiro; inki yemvura-inoshandisa mvura senzvimbo yekupararira, uye inki iri pane yepakati yekudhinda Iyo pigment inosungirirwa kune yepakati kuburikidza nekupinda kwemvura uye kubuda kwemvura.
Iyo inki muindasitiri yemifananidzo inosiyaniswa maererano nezvavanoshandisa. Vanogona kukamurwa kuita maviri marudzi: Imwe ndeye, mvura-based inks, iyo inoshandisa mvura uye inogadziriswa nemvura inogadziriswa semidziyo mikuru yekuparadza hwaro hwevara. Iyo imwe iingi-based inki, iyo inoshandisa isinga-mvura-inogadzikana solvents sechinhu chikuru chinhu kuputsa iyo color base. Zvinoenderana nekunyungudika kwezvinyungudutswa, zvinogona zvakare kugoverwa mumhando nhatu. Kutanga, inki-yakavakirwa dhayi, ayo akavakirwa pamadhayi, parizvino anoshandiswa neakawanda emuchina wemukati memapikicha; chechipiri, pigs-based inks, ayo akavakirwa Pigment-based inks anoshandiswa mune yekunze inkjet maprinta. Yetatu, eco-solvent ink, kumwe kunhu iri pakati, inoshandiswa pane zvekunze mifananidzo michina. Kunyanya kutariswa kunofanirwa kubhadharwa kune aya matatu marudzi einki haigone kusanganiswa. Mishini-yemvura-inokwanisa chete kushandisa mvura-based inks, uye oiri-based michina inogona chete kushandisa isina kusimba solvent inks uye solvent inks. Nekuti iyo inki cartridges, pombi, uye mhezi dzemvura-based uye mafuta-based michina akasiyana kana muchina waiswa, Naizvozvo, iyo inki haigone kushandiswa zvisina tsarukano.
Pane zvinhu zvishanu zvakakosha zvinokanganisa inki mhando: inopararira, kuitisa, PH kukosha, kumeso kwepamusoro, uye viscosity.
1) Dispersant: Icho chiri chepamusoro chinoshanda mumiririri, basa rayo nderekuvandudza iwo mamiriro epanyama einki pamusoro, uye kusimudzira hukama uye kunyorova kweinki nesiponji. Naizvozvo, inki inochengetwa uye inoitiswa kuburikidza nesiponji kazhinji ine chinhu chinopararira.
2) Kuitisa: Iyi kukosha inoshandiswa kuratidza huwandu hwenzvimbo yemunyu. Kune emhando yepamusoro inki, zvemunyu hazvifanirwe kudarika 0.5% kudzivirira kugadzirwa kwemakristasi mumuromo. Oiri-yakavakirwa inki inosarudza kuti ndeipi mbichana yekushandisa zvinoenderana nehukuru hweiyo pigment. Makuru anodhinda inkjet 15pl, 35pl, nezvimwewo sarudza kurongeka kweiyo inkjet purinda zvinoenderana nehukuru hwemashure. Izvi zvakakosha zvikuru.
3) PH kukosha: zvinoreva iyo pH kukosha kwemvura. Iyo inowedzera acidic mhinduro, iyo yakaderera iyo kukosha kwePH. Zvakare, iyo yakawedzera alkaline mhinduro, inowedzera iyo kukosha kwePH. Kuti udzivise inki kubva mukukanganisa kamwene, kukosha kwePH kunofanirwa kuve kuri pakati pe7-12.
4) Surface kusagadzikana: Inogona kukanganisa kana iyo inki inogona kuumba madonhwe. Iyo irinani yemhando inki ine yakaderera viscosity uye yakakwira pamusoro kusagadzikana.
5) Viscosity: Iko kuramba kwemvura kuyerera. Kana iyo viscosity yeinki yakakura kwazvo, inokanganisa iyo inki panguva yekudhinda; kana iyo viscosity iri diki kwazvo, iyo ingi musoro inoyerera panguva yekudhinda. Ingi inogona kuchengetwa kwemwedzi mitatu kusvika kumatanhatu pakushambidza kwemukati memukamuri. Kana yakarebesa kana kukonzeresa kunaya, zvinokanganisa mashandisiro kana plugging. Iyo inki yekuchengetera inofanirwa kuvharwa kuti isapinda kwezuva rakananga. Iyo tembiricha haifanire kunge yakanyanya kukwirira kana kudzikira.
Kambani yedu inoburitsa yakawanda yeinki dzekunze nekunze, senge eco solvent ink, solvent ink, sublimation inki, pigment ink uye ine anopfuura makumi mashanu matura emuno kunze kwenyika. Tinogona kukupa iwe zvekushandisa chero nguva kuti uve nechokwadi chisina kumiswa basa. Taura nesu kuti utore mitengo yako yeinki yemuno.